Izindaba - Ukuthuthuka okuphelele nokuhlanganiswa kwaphansi kwe-PVC kungakha ukuncintisana kwezimakethe
Ukuthuthuka okuphelele nokuhlanganiswa kwaphansi kwe-PVC kungakha ukuncintisana kwezimakethe
Njengamanje, ngokuthuthuka okuqhubekayo kwezinto zokwakha phansi, abantu abasagcini kumathayili aphansi. Ngaphezu kwamaphansi, phansi i-PVC kancane kancane iyakwazi ukuhlangabezana nezidingo zabathengi bezempilo yasemkhathini.
Ukuvuselelwa okugcwele kokwe-PVC flooring ukuze kufinyelele emakethe
I-PVC flooring ibizwa nangokuthi "impahla engaphansi engasindi". Ingene emakethe yaseChina ekuqaleni kwawo-1980. Luhlobo olusha lwezinto zokuhlobisa ezingasindi ezithandwa kakhulu emhlabeni, ikakhulukazi eYurophu, eMelika nase-Asia, eJapan naseNingizimu Korea. Kulezi zinsuku, ngokuthuthuka komphakathi, imakethe ye-PVC nayo ikhombisa isigaba esibi sokuncintisana, ikakhulukazi ngaphansi kokugqugquzelwa kwe-e-commerce, lo mkhuba usakazeka kakhulu, kanti imboni ye-PVC flooring nayo izobhekana nesigaba esibalulekile soguquko.
Kulezi zinsuku, imboni ye-PVC ibhekene nesigaba esibucayi sokwenza ngcono. Ukuqinisa ukulungiswa kwesakhiwo kanye nokufezekisa ukuphathwa okunamandla yizindlela ezinkulu ekukhiqizeni nasekuthuthukiseni imboni yaphansi ye-PVC. Kuyaqondakala ukuthi yize i-PVC flooring ingumkhiqizo omusha, ibifunwa kabanzi ezimakethe zakwamanye amazwe ngenxa yokusebenza kwayo okuhle kwekhwalithi nokusebenza kwezindleko eziphezulu. Lapho iningi labathengi basekhaya liziqonda izinzuzo zale nto entsha, ngokuqinisekile lizoqala isiphepho sokuthenga.
Ngokwemibiko, ngemuva kokuhlanganiswa okukhulu komkhakha waphansi we-PVC, ezinye izinkampani ezintsha nezinomthelela sezivelele, kanti ezinye izinkampani ezibuyela emuva ezinamathela kumodeli yokuthengisa yendabuko zizobhekana nokuqedwa. Lokhu futhi kuyinkambiso engenakugwemeka yokuthuthuka kwezikhathi.
Ochwepheshe bokuhlola bakhombe ukuthi ukuthembeka kokusebenza kwaphansi kwepulasitiki "kuyimpilo" yemikhiqizo enjalo. Ngokombono wokuhlaziywa kokwakhiwa, okunye ukuhlaziywa kokwakhiwa kufanele kuthuthukiswe ukwenza ngcono ukusebenza komkhiqizo. Ngale ndlela, impilo yensizakalo yepulasitiki izokwanda ngokwengeziwe. Isikhathi eside futhi esihlala njalo.
I-PVC flooring nayo ingathatha umzila wokulingisa ophakeme
Intatheli yabona emakethe ukuthi i-PVC flooring yamanje inemibala ehlukahlukene ecebile, kepha iningi lazo lilandela indlela yokulingisa ephezulu, kufaka phakathi ukulingiswa kukakhaphethi, ukwakheka kwamatshe, ukwakheka kwokhuni, njll. imibala icebile futhi yinhle. Okwamanje, okuthandwa kakhulu yizimboni zokulingisa naphansi. Ukulingiswa kokhuni lokulingisa kunokuthungwa okuhle nomuzwa wemvelo futhi omusha waphansi wokhuni. Imisebenzi yezandla ehlanjululwe kakhulu iba nencazelo yasendulo nengokwemvelo yendawo yokhuni lwasendulo; ukulingiswa kwemabula kokulingisa. Inokuthungwa okucebile kwemvelo kwamatshe emvelo, acishe afane naphansi wangempela wokhuni nemabula ngokwemiphumela yokubuka nokuzizwa konyawo.
Ngaphezu kwalokho, ngoba impahla ye-PVC inganqunywa ngokungafanele ngommese omuhle wensiza, yeqa umkhawulo wezinto zokwakhiwa kwaphansi okujwayelekile futhi ingahluzwa ngemibala ehlukene yezinto, ukuze abantu banikeze ukudlala okugcwele kubuciko babo futhi bahlangane nalowo muntu izidingo zezitayela ezahlukene zokuhlobisa. , Ukufeza umphumela wokuhlobisa amanye amafulethi kunzima ukuwufinyelela, ngokusika okwenziwe ngokwezifiso nobuciko, indawo yokuhlala izoba ngawodwana nobuciko.
Isikhathi seposi: 05-06-21